Imibuzo Evame Ukubuzwa | Taizhou Huangyan Longxin Isikhunta Co., Ltd.
Singabantu A ifektri.
Ngifika kanjani efektri yakho?
Ungafika edolobheni lethu ngendiza, ibhasi noma isitimela.Kuthatha amahora ama-2 ukusuka eGuangzhou uye edolobheni lethu.Kuthatha amahora ama-3.5 ukufika edolobheni lethu usuka eShanghai ngesitimela.Ihora kuphela ngesitimela ukusuka eNingbo kuye edolobheni lethu .
Kuyini ukulawulwa kwekhwalithi kufektri yakho?
Sikholelwa ukuthi "ikhwalithi ingaphezu kwakho konke". Sineqembu eliqeqeshiwe lokulawula ikhwalithi. Ithimba lethu lokulawula ikhwalithi lenza lezi zinyathelo ezilandelayo.
Ukulawulwa kokuklama kokuklama B: ukuqina kokuhlolwa kwesikhunta sensimbi C: ipayipi yokuhlola isikhunta sokuhlangana komhlangano Uma uneminye imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ngale ndlela elandelayo.
Uma ngikunikeza ngemidwebo ye-3D yomkhiqizo, ungacaphuna futhi wenze isikhunta ngokuya ngemidwebo ye-3D?
Amafayela we-Yes.DWG, DXF, STEP, IGS, kanye ne-X_T angasetshenziswa ukucaphuna nokwenza isikhunta ngokuya ngemodeli yakho - lokhu kungonga isikhathi nemali ekukhiqizeni izingxenye.Uhlobo luni lwesikhunta ongasenza?
Asikwazi akhiqize zonke izinhlobo zepulasitiki umjovo isikhunta, PVC, PPR, PE nezinye ipayipi nokufakwa isikhunta. Singancoma inani elifanele lezimbobo ngokuya ngosayizi womshini wokubumba umjovo
Yimiphi imigomo yakho yokukhokha?
Ngu t / T, L / C, isiqinisekiso sokuhweba kanye ne-Western Union.
Singakanani isikhathi sokulethwa sakho sesikhunta?
Ngemuva kokuvunyelwa komdwebo wesikhunta, kuthatha amasonto ayisishiyagalombili kuya kwayi-8 ukwenza isikhunta, ngokuya ngesakhiwo sesikhunta kanye nenani lezimbotshana (ezilodwa noma eziningi). Usuku lokulethwa luzobalwa kusukela ngosuku ovumela ngalo umdwebo wethu wesikhunta. Emva kokuqinisekisa isampula sethu sokugcina, singakuthumela isikhunta seplastiki kungakapheli isonto elilodwa.